Shirkadda HUB CRM Integration - 1000 + Codsiyada | Isku day Iminka!
Waxaan u isticmaali karnaa cookies si loo wanaajiyo shaqeynta iyo waxtarka isticmaalkeena. Akhriso noo Siyaasadda cookie wixii faahfaahin dheeraad ah. U helay
CRM-ga la dhigo
Abaabulida & Hoggaannada Dheeraadka ah
Isdhex galka kale
Iyadoo shirkadda shirkadu leedahay waxaad heleysaa isdhexgalka aan dhammays-tirnayn ee dhammaan codsiyada caanka ah
Zapier wuxuu ku siinayaa dabacsanaan si aad u dhexgaliso xisaabtaada shirkadda "CompanyHub" kumanaan barnaamijyo ah si loo kordhiyo wax-qabadkaaga. Waxaad isku-dhexgelin kartaa barnaamijyada sida MailChimp, Book Quick, Slack iyo waxyaabo kale oo badan si loo baabi'iyo dhammaan hawlaha buug-gacmeedka caajiska ah ee shaqadaada shaqada.
Hadda isku day
Iyadoo PieSync waxaad ku xiri kartaa barnaamijyada daruurigaaga leh xadiiqada 2-smart. PieSync ayaa kaa caawin doonta inaad la wadaagto xiriirka macaamiisha ee u dhexeeya Suuq-geynta Suuqa, Boostada Email, Deeq-bixinta iyo barnaamijyada E-Commerce.
Si nidaam kasta oo CRM ah ay u bixiyaan aragtida dhabta ah ee 360 macaamiisha iyo adeeg bixiyaha maxium ROI, waa lagama maarmaan in la helo isdhex galka iskaashiga leh dhammaan arjiyada ganacsiga ee khuseeya. Shirkadda HUB REST API ayaa kaa caawin doonta inaad sidaa samayso. Iyadoo shirkada CompanyHub API la wadaagto dhammaan codsiyadaada ganacsiga oo aad hesho dhammaan aragtiyada aad ubaahantahay.
CompanyHub wuxuu ku siinayaa shey yar oo kood ah. Isticmaal lambarkan si aad u abuurto foomka boggaaga internetka, oo kaliya dib u fadhiiso oo naso. Sida ugu dhakhsaha badan booqdahaaga soo socda ayaa booqanaya website-kaaga oo soo gudbiya foomka, booqdahaaga si toos ah ayaa loo abuuri doonaa hogaanka cusub ee xisaabta CompanyHub, Shirkadda CompanyHub Websaydheeda Lead waxay abuureysaa habka ugu dhaqsiyaha badan uguna wax ku oolsan si aad ugu badasho dhammaan martidaada macaamiishaada .
Shirkadda HUB waxay la shaqaysaa ...
Gmail iyo jadwalka Google
Qaado 15 min minus of CompanyHub oo diyaar u ah inay farxad
Aan isku dayno 14 Maalmo tijaabo oo lacag la'aan ah. Looma baahna kaarka deynta.
Qaababka ugu sarreeya
Si macquul ah
Hay'adda suuq geynta
on Availableapp Store
Copyright © 2018 CompanyHub. All rights reserved
Raadso Bilaab. Looma baahna Kuraas.
Magaca ayaa loo baahan yahay
Gali cinwaanka emailka ee saxda ah
Marka aad saxiixdid, waxaad ku raacsan tahay noo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Shuruudaha Isticmaalka
Fadlan buuxi faahfaahinta si aad u hesho qiimaha
Hooyo! Qalad ayaa dhacay!